Daawo Video Golaha Wakiilada Somaliland oo Taageeray Shirkada DP World iyo Khilaaf Hor leh | Kalshaale
Daawo Video Golaha Wakiilada Somaliland oo Taageeray Shirkada DP World iyo Khilaaf Hor leh
Mar 13, 2018 - 41 Aragtiyood
Hargaysa (Kalshaale) Golaha Wakiilada Somaliland ayaa Maanta Ogolaaday Heshiiska Lagu iibinayey Dekeda Magaalada Berbera Kaas oo Shalay ay Diiden Barlamaanka Somalia.
inkasta oo Barlamaanka Somaliland Ogolaaday Heshiiska Berbera Hadana Waxaa Cadaan ah inay u Kala Dhamaatay Shirkada DP World iyo Somalia Maadaama Barlamaanka Heer Fadaral Arrintan Diiday.
Madaxweeynaha Jamhuuriyada BARAKAYSAN ee Somaliland oo marti qaad rasmia ah ka hellay dalka IMAARAADKA carabta, iyadoo wararku sheegayaan inuu galabtaba ka duulaayo Hargeisa, waxay wararka qaar sheegayaan inuu halkaas ka helay marti qaad rasmia ah oo dawlada UAE u fidisay madaxwenaha.
Baasaaboorka jamhuuriyada barakayasan eee Somaliland ooy aqbashay dawlada UAE in dalkeega lagusoo gallo.
asc halkan kama shaqeeyo heer madaraal ee dadkii lahaa ayaa kataliya waana hawo waxa ay sheegayaan waxana ay lamitahay sidii aan hore ushegay markay dhaheen waxa. aan laka dirnay maamulkii jubbaland wayna ku fashil meen
maansha allaah sxb somalilander war wanaag san ayaad sheegtay waana lakala baxayaa in
War deg deg ah.
Maamulka khaatumo state,oo kuuriyada waqooyi ka soo iibsadey,diyaaradaha dagaalka IYO gantaalaha ridada fog.
Berberay baratee,hadaanaan fiyaanbiro IYO fiiq ,xeryo idinka oodin,Farxiyo leyma yidhaahdo.
HABARYAR NOOLOOW, WALEE DAGAALKAAGU MA YADHA
FARXIYO XAM XAMLE
huuno waan ku salaamay hhhhhhhhhhhhh maxaa tidhi gantaalaha ridada dheer,oo gantaalahaa marka la keeno halkee ugu horaysa ee lagu ridayaa aanu kasii qaxnee
Ku lahaa Baasaboorka barakaysan…. War Iidooor wuxuu tuban yahay GAROOWE.
3 berri oo ay guuraysay laanta socdaalka, baa laga yaabay GAROOWE sida ay noqotay.
IIDOOR oo DHULBAHANTEE ka yaha KAFIIL ayee GAROOWE la cidh-ciidhaysaa.
somalilander iyo cabdi yare
saaxiibayaal waan idin salaamay,,waar qadiyaddii Somaliland bay arinta DPW cirka geysey adduunyadii oo dhan ku mashquushan xataa kuuriyadii waqooyi iyo jaynihii,,tvyadooda waxa ka baxaya
JUNG JAN,KHOOKHAA FAANDUUSSOMALILAND BERBERA oo macneheedu yahay dawladda Somaliland oo heshiis la gashay dpw ayay mooryaan koonteenar lagu ilaaliyo ka daba yuusayaan hhhhhhhhhhhhh
Maantay SOOMAALIWEYN waxeey leedahay labao cadow. Labadaas cadow waa:
2. IIDOOR WAGASHLEE
IIDOOR WAGASHLLOWW mid ogaada, waa laga yaabaa in aad dawlad ku hishaan dhulka IIDOOR WAGASHLEE, laakeen, walaahi xaaraan waayee, in dhul HARTI DAAROOD leeyahay in aysan SOOMAALI WEYN ka tageen.
Haddii uu dhaco dagaal, waa rajaynaynaa in uu dhaco, wax la yiraahdo SOOMAALILAND daaqada lee ka baxday.
Ciise binu axmed.
Salaamulaahi walaal, salaan gobeed gudoon.
Ciise Dee waanba idiin sheegee, hargeysa IYO burco IYO berbera, hadaan dhurwaagu
Raqda ka dhergin,xiniinyo iguma jiraan.
Adiguna ciisoow,ileyn qori-is-maris baad tahee,raqda ka noolow.
dee maxaan raq ka dhergaa Hargeysa iyo berbera iyo burco way iga fogyihiinoo saylac kasoo hangalaysan kari maayee ,maad xabad boorama kusoo weecisaan taasaa ii dhow oo aan ka noolaan lahaaye
Barlamaanka hargaysa muxu kaga uwanyahay kagaroowe ama ka kismaanyo
dalka waxa metela baarlamaanka dowlada federaalka ah
o maamul goboleed waliba ku leeyahay dad metela xitaa
maamul goboleka woqoyi galbeed dad metela ugu jira kkkkkkkkkkkk
Ciise binu xildiid.
Iminka qorshaha nooguma jirto seylac,boorame.
Ee hadey idinku soo qaxaan abtiyaasha,markaasaan laba idinka dulrideyna.
Ciise maxaa zeylac kaa galay.Maad ku riyootay.
Maxaad iska riyootay zeylac.
1 guri oo ciise leeyahay kuma yaalo,magaalada zeylac.
Afka ka sheego oo meelaha kaga sheekee Ciisaa Zeylac dega.
Idoor kuma siin karo Zeylac.
DUNIDAN (INTERNATIONAL LAW) BAA KA SHAQEEYA EE INDHA ADAYG MASHAQEEYO.
HESHIISKA DP WOLRD WAA XAARAAN.
Baroortii Villa Soomaaliya laba wax bay dhashay.
1. Somaliland xayaysiis bilaasha ayay u noqotay.
2. Reer Somaliland cidhif ilaa cidhif waxay gacmaha isku qabsadeen meela iga soo wadajesteen iska difaaca cadawga dhex fadhiya villa zoo-maaliya. Markay arkeen afxumada iyo cadaawada qaawan ee ay Somaliland ula yimaadeen.
3. Somaliland oo joojisay wada hadaladii u furmi lahaa zoo-maal.
Karis xuma iyadaa ku la,
Baarlaan kee? Makan SNM?
MR Bahal aan ku saxo kan wataa Ciise ma aha qabiilka Ciisaha Loo yaqaan waa Hal lowya buur H/Jeclo ah.
Mida kale howsha DPW waa dhamaatay
Waxaa HARGEISA ka jiray mashruuc la yidhaa – jiif oo jaqkkkkkkkkkkkkkkkk
Dadka ayaa lagu yidhi hadaad bixiso 3000 oo $ mwaxaad helaysaa bilwalba 300 oo $ oo lacagtaadii kuu dhashay.Dadkii maangaabka ahaa lacagtii ayay u wada geeyeen Tuugtii fikradan la timid.Qofkasta lacagtisii uu bixiyay ayaad wax laga siiyay oo dib wax yar looga gooyay si loo seexiyo. bilkasta,300,200.600,sida loo kala lacag badan yahay ayaa haatanna loo kala macaash badan yahay.
Hadii aad laba kun bixisay oo bishii lagu siiyay 200 ilaa 5 bilood,$ kunbaad qabtaa ,kuna waa lagaa dhacay.
Dadkii wax garad ahaa ee arinkan tuugonimada fahansanaa,waxaa lagu sheegay dad xaasidiin ah.
Haatan arinkani waa kii jiif oo jaq,kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Nayaa farxiyo xaa igu maagtay Malin dhaweed aa. Caydii u xiistay aa I sug hello abwaan deeq aa joogta qoftii Soo bax hello idoor liqe AAA hawshina qabsadaa mmmmmm
Go, aamada ka soo baxaa waa hal Bacaad lagu Lisay!
Mee go, aankii ku aadanaa Qalbi Dhagax? Farmaajo iyo Khayre wax maka qabteen?
Jawaabtu waa Maya waayo waa laba sumal oo xiniinyaha ka tuman. Ma ku dhacaan inay Itoobiya oo villa Soomaaliya ku ilaalisa juuq u yidhaahdaan.
Tan kale ee tusaalaha u ah fashilka barlamaanka Soomaaliya waa weerarkii lagu qaaday Cabdi Qaybdiid 3 bil iyo badh ka hor. Gudi loo saaray ilaa hadana aan Farmaajo iyo Khayre keenin natiijada ka soo baxday weerarkaa.
Bal halkaan ka daawada khudbadii uu Cabdi Qaybdiid ka jeediyay golaha baarlamaanka iyo ceebaha uu fashiliyay!
Qeylada berbera waxa wada waa daarood waana qabyaalad ee qaranimo kama aha hawiyana qeylada iskama baandheyn ee waa iskaqeyliyey isaaqna haduu af libaax galay xabsiga ogaadeen ee jigjiga aa yaabay
subxaanaka yaacadiim halakala saaro caadifada qabyaada
iyo adaniyada waar dalku wuu inaga dhexeya qabiil gaara
maleh hadaad maanta u hiilnwaydo o kadhicin waydo
cadowga ku soduulay kaberi caruurtisa lagu gumaysanaya waa adiga dalkan
jiilba jiilbu kasodhaxlay halkaad rabta nay
caruurtadu ku nolaato hadaanad maanta u hiilin
dalkaaga hooyo xabashiba laraba in lagubeero
belaayo dhego laqabtay leedahay e maleh dabo laqabyo
waa maahmaah somaaliyeed WBT
Qeylada waxba hayska dhaneyn waayo siyasiyintadi ayaa baroosti ka dhamatay.
Dawlada somalia go,aankeda ayaana shaqeynaya taas ogoow.
Somalialnd maha mamul sharci ah sida mamulada kale.
Mamulkina waxa wajib ah marka hore inla sharciyeyo adna dawlad ayaad sheganeysa khiyali !
Sool iyo Sanaag iyo Awdal waa somaliweyn adna aqliga waxad rabtaa inaad shegtid!
Puntland Iyo Somaliland waxa Qm uga diwan gashan labada ineyka tirsanyihin e sidee laguu aqoonsan karaa ileen waxan 3 degmo aheyn maheysane?Hargeysa Burco Barbara laf cad ayaad toobin kuheyseen hadana intii yareyd Ethopian ayaad rabtan inadku wareejisan gah gah gah gah gah gah gah
Adiga iyo Ilma qiiro jabaan dhinaca hadalka uu huu haada ayaanu idiin daynay, Somalilander- kana ficil.
Ama qaramada midowday ka qoroow ama Dawarsi Amison ku nooloow.
Xaqiiqda waxay tahay in aan Anigu dhulkayga xukumo.
Hadaad afxumada aanad awood ku darayn joojin weydaan bisha danbe Garoowe ayaa ciidanka Somaliland ka quraacan😀
asc somaliya hadday somaliland u aragto dadyar maxaa daba dhigay somliland immika arrinkeedu wu cadyahay dagaana waa udiyaar nabadna waa udiyaar bal reer xamarow mid uun doorta
Anigu shacabka Puntland weligoodba waa taageeraa laakiin markii Qarjab iyo Gaas cawar hanjabaad naga dayn weydeen baan ciidanka qaranka JSL u fasaxay inay tagaan Boocame iyo Tuka raq
Hal xabo ma riday Caac weli iyo Qarjab?
Go, aamada ka soo baxa villa Soomaaliya waa uun sidaa.
Hadal iyo hanjabaad aan ficil lagu darin= yac yacood!
caawa waxan lahadlay nin aan sxb nahay oo joga moq_disho waxa u ishegay mesha in ay shabaab mamusho oo immikan ay jojiyeen goobihii jimicsiga weyna qateen amarkaa wana lahakiyay
sxb laaleys gudomiye aad ayaan ku salaamay waxa aan ku leyahay cidanka ka ilaali in ay galaan garoowe maato ayaa ku mool waxana kugu ogaa adiga oo kadifaca buntland wixii gardara ah ee maxaa isbadalay?
Waxba haw caqli celin sxb ilma qiira jabaan, waa sab, colaada ay Somaliland oo danahooda gelin u muujiyeena maanta walaahay waxay keentay in xitaa walaaltinimadii naga dhaxaysaysay ay reer Somaliland saqiir iyo kabiir ay teneg xashiishi ku rideen.
Ninka kuu diida inaad noolaato, horumar gaadho xabad ayuun baa inagadhaxaysa.
Karis xun iyadaa ku la,
Haday DP meel ka caydhinayaan dee Boosaaso haka eryeen, Ber Bera ma maydkay 1988 kaga yaaceen baa dib u soo noolaan oo maamuli? Yaabnee!
@ waa ku salaamay indr adna, Garoowe indr asxaab baan ku leeyahay, dad nabada jecel baa degan, ciidana gayn mayno hadaan Nala kelifin😀
waa runtaa sxb weynu ee waxa ay ka macaashaan annigu dalka ayaan jogaayo marka amar lanagu siiyo in aan sobaxno diyaar ayaannu unahay waa ciidamada keedka warabtuna waxa ay dhahdaa جيش الاحتياط
waar laaleys sxb kalshaale miyuu kacay sokan haawana
Wakiillo kulahaa. Masaakiin. Iidoorku badownimadiisa looma kala hadhin save inta garxajiska mooye inta kale badankooda waa wada qac miidhan
Bal qaran dhan oo jira buu Iidoorka qaar ku qarwahayaa inuu dalka ka iibiyo ciiddiisa carab xun iyo gaalka xabashka ah. History repeat itself
Faataaabkh iyo miyir la;aan dheh.
Tegidda Muusa shaani Imaaraadka kama duwana tan gaas iyo kuwa kale ku tagaan Xabashida iyo UAE
Muuse shaani waa nin oromo ah sida Abdisalaam Gentleman hadalkiisa ka muuqata. Wuxuu malaynaya Imaaraadka oo dhan 200 oo Kun inay caqligooda niijaaska ah u yeedhin karaan Somalia.
Waxay imaaraadka ku jirtaa dhala dil dillaacaysaa. Waxa Iman doonaa waxay noqon doonaan wax ay ka qoomamayaan nijaaska Maxamed Zayid iyo brotherhouseka la socda.
Aqoonsiga UAE waa sida xaar walwaalka oo kale.
Buugga Iidoor samaysteen iyadana ma shaqayn karo waayo waa mid hinaaso beeleed ku yimid.
Dowlad dhan oo dalkeeda la badh jafayo
from Igad to Arab league to AU, to UN cid aqbalaysa malaha.
Nijaastanna waxaa ku filan waxaan dowlad u aqoonsannay shaariqadan iyo dubai dan gilgilanayaan.
Imaaraadku dayn buu la ciidhayaa, jiritaankiisa ayaa war ka taagan yahay. Inay 7 imaaro kala tagaan ayay maraysaa.
Anigaa dhex jooga, yaan been la idiin sheegin.
Down UAE and Ahmara lackeys
waar muse isaga ayaa somaliland utaliya waa in aad liqdaa illen qadhaadh ayay kugu tahaye warkiisuna wuu cadyahay
Naclataa calaa wajhak yaa munaafiq. Hadaad UAE necebtahay maxaad u joogtaa ee uga dawarsataa?
Beri safaraada UAE ee Holland ayaan balan la leeyahay, adoo kale iyo kuwa ka ciicle villa zoo-maal persona non garata hadii ay UAE ka noqon waayaan weligaa waxba hay weydiin!
Doonyaha badeecada keena Xamar, Boosaaso iyo Kismaayo 95% waxay ka yimaadaan Dubai, bal markuu Farmaajo saxeexo go, aanka baarlamankiina aan arago meesha aad badeecad ka keensanaysaan!
Kuwa baarlamankiina ku jira mid aan Dubai caafimaad, nasasho ama transfer ku marin ma jiro.
Waa laga mamnuuci.😀
Rag inaad tihiin waxaan idiin qiri, marka aad caydhisaan safiirada Itoobiya iyo kan UAE. Shirkada DP World- na ka eridaan Boosaaso.
Car wir ku dhac!!!
Afka nool fawqal afka nool.
Weligaa si xor ah ugama aadan jawaabin fikirrada aan golaha soo dhigo. Waxaadu waa cay iyo nacasnimo.
UAE aqoontayda ayaan ku joogaa sidaan Mareykankaba ku joogay aqoontayda faan la;aan. Badownimadaada ayay ka mid tahay in UAE kabaha loo qaado haddii shaqa loo joogo. Jahaala.com
Ugu dambayn haddaad tagto UAE embassy in Holland maxay iga qaadi karaan. Kkkkkkkk
Miskiin jaajus la kordhigay.
Adeer Suldaanku Imaaraadku qiima iiguma fadhiyaan. Mar dhowna insha Allah waa ka diga rogan doonaa.
Waan ku jaajuusi kulahaa…..kkkkkk
Nin abtirsaday dheh ama xarrig cadow cuskaday.
Bal car tag safaaradda, snap chat noo soo samee……….kkkkkkkkkkkkkkkkk
Down UAE and Amhara lackeys
Kulaylka dhaaf wax ayanku weydiyey jawabna waad uweydey garoowe ayaa cidnka ka quraac afmahee dadka aad khasabtid ama aad xukuntid xagee joogaan marka laga reebo inta aad degtid ?isaqiba somaoand rabin maanta ninka hogamiha ku waninka mar walba dagaalku hanjaba jahilnimo daradeed adiga hada waxadku hanjabeysa safarad ayaan tagaya iyo xoig ayaan shegan sowma ogid somalidu waa inyaroo istaqana heydaline mamulka sharciyeyso somalinimo waa sandule dhulaksna somali ayaa leh.
Carab iyo ethpian maxadka helaysa bes iney jeedal kula dhacaan ximaarna kugu sheegan gah gah gah gah gah